Amawa Omlingo kaMoher | Izindaba Zokuhamba
UMariela Carril | | Ireland, Yini ongayibona
I-Los Ummango we-moher Zingezinye zezimangaliso zabavakashi zase-Ireland futhi yebo, zingumlingo. Ukusika okungazelelwe komhlaba lapho uhlangana nolwandle namazulu kuyamangalisa. Uyabazi mathupha? Akunjalo? Lapho-ke zingaba yindawo enhle kakhulu, ngisho nasebusika uma amakhaza nomoya kungakusabisi.
Ireland Akukude kangako uma uwuthanda umqondo lapha sikushiyela imininingwane ngamawa nokuthi ungayenza kanjani i- ukuvakasha kwabavakashi ngaphandle kokuphuthelwa okuhamba phambili kubo. Ukuvakasha kokufunda!
1 Amawa kaMoher
2 Vakashela amawa kaMoher
Basendaweni eyaziwayo yaseBurren, e-county clare, IRiphabhlikhi yase-Ireland. Zakhiwe cishe eminyakeni eyizigidi ezingama-300 eyedlule futhi ikakhulukazi zingamatshe amatshe amatshe, yize amadwala amadala kunawo wonke atholakala ezansi.
Phakathi kwemifantu emadwaleni kuphila ngaphezu kwe- Izinyoni eziyizinkulungwane ezingama-30, okuthile okufana nezinhlobo ezingama-20 ezihlukene, futhi ezinyaweni zazo, olwandle, kukhona amahlengethwa, oshaka namabhubesi olwandle. Bahamba cishe amakhilomitha ayi-14 futhi bafike endaweni ephakeme kakhulu Amamitha ayi-214 ukuphakama, e-O'Brien Tower. Ngakolunye uhlangothi zingamamitha ayi-120 ukuphakama, endaweni eyaziwa ngokuthi iHag's Head.
Ukusuka esiqongweni se-O'Brien Tower ungabona i-Aran Islands, izintaba zeTwelve Pines noma iGalway Bay, nangobukhazikhazi bayo nemibono yayo emihle ukuthi izivakashi ezingaphezu kwesigidi zibavakashela ngonyaka. Yiba ngomunye wabo!
Amawa ayingxenye ye- IGeopark kusuka eBurren and Cliffs of Moher futhi kuyiphuzu elibalulekile komunye wemigwaqo yezokuvakasha ethandwa kakhulu futhi enhle i-Ireland okufanele inikele ngayo, iWild Atlantic Way.
Vakashela amawa kaMoher
Amawa ayehlala evakashelwa kakhulu ngabantu, kepha ngeminyaka yama-90 uhulumeni waqala ukuyithatha ngokungathi sína kakhulu futhi wahlela ukuvakashelwa. Ngalesi sizathu, nangombono wezokuvakasha kwemvelo, ngaphandle kwezakhiwo zabantu eziphazamisa phakathi komhlaba nesipiliyoni sethu, sesimanje Izivakashi Isikhungo ngaphakathi kolunye uhlangothi lwegquma, ngaphambi kokufinyelela emaweni afanayo.
Imisebenzi yathatha iminyaka eyi-17 neminyango yavulwa ngoFebhuwari 2007. Kungcono ukuvakashela le ndawo ngaphambi kokuphuma uyohlola amawa ngoba ine ukubonisa okuthakazelisayo kokuma kwendawo, izimbali, izilwane nezomlando. Kunezikrini ezinkulu zemultimedia, ukubukwa kwezinyoni ngasogwini, namavidiyo emigede ongeke uze uvakashele ngoba angaphansi kwamanzi, phansi kwemihume.
Ukufika kuleli sayithi kulula kusuka kuwo wonke amadolobha namadolobhana azungezile. Kusuka eGalway, Kinvara, Limerick, Doolin, Ennistymon, Ennis noma eLisdoonvarna ungathatha ibhasi kulayini wombuso Ibhasi Éireann. Kunezinsizakalo eziningana ngosuku futhi uma kungenjalo kuhlale kunamabhasi azimele. Abantu abaningi bahlala eDoolin, ukuze ifinyelele kalula emaweni, kuyimizuzu eyishumi ngemoto, kodwa futhi nangesiko lasendulo lase-Ireland namathafa angalibaleki.
Kufanele uvakashele nini ama-Cliffs of Moher? Yebo, zingenye yezindawo eziheha kakhulu e-Ireland eziteshini ezimnandi kakhulu kunabantu abaningi. Yingakho ngithe uma amakhaza noma umoya ungakusabisi, ungazikhuthaza nokuthi uvakashele kubo ebusika.
Ukuvakasha okuvela eDublin noma eGalway, amadolobha amabili amakhulu, (iDublin iqhele ngamahora amathathu bese iGalway ikude ngemizuzu engu-90), ifika phakathi kuka-11 ekuseni no-4 ntambama ukuze isikhathi sesikhathi sibe nzima kakhulu. Uma uzihambela, kungcono ukuhamba ekuseni kakhulu noma ebusuku kakhulu. Ukushona kwelanga kuhle!
Zimbalwa izivakashi ezihamba lonke ubude bamawa futhi zivame ukuhlala zizungeze isikhungo, okungukuthi, eduze ne-O'Brien Tower kanye nengxenye yodonga. Uma ungayi njengengxenye yohambo unesikhathi esithe xaxa ukuze ukwazi ukuhamba kakhulu, okuyinto enhle ngoba ushiywe uwedwa. Ngaphezu kwalokho, ungabhalisela i- ukugibela isikebhe ngesisekelo sayo noma ku- Inqola Yasogwini Amakhilomitha ayi-12 ngaphezulu kwamawa.
I-Coastal Trail iqala eDoolin futhi ifinyelela kuHag's Head inikeza indawo enhle kakhulu: amawa, isibhakabhaka, izimpophoma, amahlathi kuyo yonke indawo, azikho izimoto. Ungakwenza wedwa noma ubhalisele eyodwa nomhlahlandlela. Kulokhu kunomlimi wendawo ogama lakhe linguPat Sweeney ohlela ukuhamba njalo ekuseni ngo-10 ekuseni. Kungukunyuka kwamahora amathathu futhi kuyathakazelisa kakhulu.
Ngiyakukhumbuza lokho akukho lapho kungalala khona emaweni uqobo nokuthi idolobha eliseduzane iDoolin lapho okunikezwa khona indawo yokuhlala kuhlukahlukene yize kugxilwe ngaphezu kwanoma yini eBed & Breakfast Breakfast. Ngokusobala, kunamahhotela aphambili anokubukwa okungenakulibaleka.
Uma uya ebusika kufanele uqoqe kodwa iqiniso ukuthi njengoba kungogu kumele uhlale uletha ijazi ngoba isimo sezulu sishintsha ngokushesha okukhulu lapha. Imvula yezikhathi ezithile nayo ivamile futhi isobala, gqoka izicathulo ezintofontofo ezingasheleli. Uma uhlala eduze kweSikhungo Sabavakashi ungakuthokozela ukudla okudliwayo nezindlu zangasese zaso kodwa uma uzihambela, zama ukuthola okudingayo nawe.
Kunocingo lwamapulangwe oluhlukanisa indawo yomphakathi namapulazi azimele kepha ungaludlula bese ulandela umzila, yize ngikuxwayisa ngokuthi umgwaqo awusalondoloziwe kahle. Okokugcina, ngabe ubukwazi lokho kunabantu abashadayo lapha? Yebo, eDoolin, endlini enhle, enhle enolwandle, kepha ngemuva kwalokho abashadikazi bakhuphukela emaweni futhi bathathe izithombe ezinhle njengalezi ezingenhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » Ireland » Amawa omlingo kaMoher
Umkhosi Wokukhanya eBoimorto